यसकारण स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more यसकारण स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो
February 22, Sat
यसकारण स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो
अशोज ४ गते, २०७६ - ११:४१
प्रदेश, प्रदेश न. १, मुख्य समाचार
इलाम । सरकारले स्थायी लेखा नम्बर ९प्यान० नम्बर लिन सबैलाई अनिवार्य गरेसँगै इलाममा पनि यो नम्बर लिनेको सङ्ख्या उल्लेखनीयरूपमा बढेको छ ।
सरकारले यस आर्थिक वर्षको शुरुबाटै स्थायी लेखा नम्बर लिन ताकेता गरेसँगै इलामको कर कार्यालयमा नम्बर लिने ह्वात्तै बढेको छ । करदाता सेवा कार्यालय इलामबाट हालसम्म सात हजार ६६६ ले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् । कार्यालयबाट हालसम्म आयकर आठ हजार ८३८ ले लिएका छन् ।
मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ६९१ फर्म दर्ता भएका छन् भने अन्तशुल्कतर्फ ७७० फर्म कर कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । यस्तै संस्थागत प्यान नम्बर लिनेको सङ्ख्या ३२ मात्र रहेको छ । यसरी हेर्दा कार्यालय इलाममा हालसम्म १७ हजार ९९७ करदाता रहेको तथ्याङ्क छ ।
कार्यालयमा अहिले हरेक दिन व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको भीड बढी नै रहेको कर अधिकृत प्रकाश राईको भनाइ थियो । सरकारले हरेक व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिन अनिवार्य गराएपछि मानिसको चाप कार्यालयमा बढेको उनले बताए । धेरैजसो विभिन्न सङ्घ संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् ।
कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड बढ्दै गएपछि कर्मचारीमा कार्यबोझ पनि बढेको छ । कार्यालयबाट अहिले दैनिकजसो ५०–६० जना सेवाग्राहीले स्थायी लेखा नम्बर लिइरहेका छन् ।
अशोज ४ गते, २०७६ - ११:४१ मा प्रकाशित
प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो जन्मदिन मनाउन पुख्र्यौली घर जाने
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भोली आइतबार आफ्नो जन्मदिन मनाउन तेह्रथुम जाने भएका छन् । प्रधानमन्त्री...
काठमाडौं । लगातार उकालो लागेको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार नेप्से परिसूचकले नयाँ इतिहास कायम गरेको...
डोलेश्वरबाट यसरी बिदाई भए साधुसन्त
भक्तपुर । केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा महाशिवरात्रि पर्वको लागि आएका साधुसन्तलाई आज शनिबार...
सुन उत्पादनमा अब दोस्रो देश बन्दै भारत, हजारौं टन सुन उत्खननको तयारी
नयाँ दिल्ली । भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले सुन उत्खनन प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि ई–टेन्डर सुरु गरेको...
लोकतन्त्रको आवरणमा भ्रष्टाचार गरिँदैछ : अध्यक्ष थापा
धनगढी । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष कमल थापाले देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको...
नेकपा सचिवालय बैठक बस्दै, यस्ता छन् एजेण्डाहरु
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आज शनिबार अपरान्ह सचिवालय बैठक बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री...
हामी गोकुल बाँस्कोटालाई छुट दिने पक्षमा छैनौ : अध्यक्ष प्रचण्ड
चीतवन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार गर्ने जो सुकैलाई...
सेक्समा कस्तो आसन मन पराउछन् भारतीय ?
एजेन्सी । भारतमा ६२ प्रतिशत पुरुष र ५८ प्रतिशत महिला आफ्नो यौन जीवनवाट सन्तुष्ट छन् । एक सर्वेक्षणमा...
गोकुल बाँस्कोटा काण्डमा प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ : कोइराला
नेपालगन्ज । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा...
यौन शिक्षामा छुट्टै पाठ्यक्रम बनाउन किशोर–किशोरीको माग
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका किशोर–किशोरीले यौन तथा प्रजनन शिक्षामा छुट्टै पाठ्यक्रम बनाउन माग गरेका...
सोलुको विद्युत सिराहामा जोडिदै : दोस्रो पटक पुनः म्याद थप, काम जहाँको त्यहि
एमसीसी परिमार्जनसहित अनुमोदन हुन्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
चीनसँग स्पष्ट सम्बन्ध नभईकनै कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिँदा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन चिन्तित
बाजुराकाे प्रहरी कार्यालय नजिकै प्रेस कुकर बम फेला, सेनाद्वारा डिस्पोज
अबदेखि छोरीको बीमा गराउनेलाई निः शुल्क इन्टरनेट सेवा
राँके–रवी–भेडेटार सडक निर्माणले गति लियो
माओ र चीनको मात्रै होइन नेपाली मिडियाले नेपाल कै वेइज्जत गरेका छन् : डा. दिक्षित
कमिसन काण्डबारे प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नै छानबिन गर्न विप्लवको माग
महाशिवरात्री : पशुपतिनाथ मन्दिरमा जे देखियो (१० तस्विरमा हेर्नुहोस्)